अक्टोबरमा ओसाका मौसम! तापमान र वर्षा - Best of Japan
डोटनबोरी मनोरन्जन जिल्ला। ओसनका जापान = शटरस्टकमा डोटनबोरी प्रमुख पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक हो
अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म जापानमा अद्भुत शरद seasonतु जारी छ। यो अक्टुबरमा ओसाकामा तुलनात्मक रूपमा चिसो हुनेछ, र राम्रो मौसम जारी रहन्छ। अक्टुबरमा, यो ओसाकामा यात्रा गर्न उपयुक्त समय हो भनेर भन्न सकिन्छ। यद्यपि, भर्खरको मौसम पूर्वानुमानका बारे सचेत हुनुहोस् किनकि एक अन्धकार आउँदो आउँदैछ। यस पृष्ठमा, म अक्टुबरमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु।
अक्टूबरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसममा लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ।
अक्टोबरमा ओसाकामा मौसम (अवलोकन)
ओसाकाको अक्टोबरमा (२०१ 2017) को मौसम
अक्टोबर (२०१ 2017) को बीचमा ओसाका मौसम
ओसाका मौसम अक्टोबरको अन्तमा (२०१))
ग्राफ: अक्टोबरमा ओसाकामा तापमान परिवर्तन
यस पृष्ठमा, म जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले घोषणा गरेको ओसाकाको अक्टुबरको मौसम डेटा निम्न रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। यो डाटालाई हेर्दै, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि अधिकतम तापमान एकदम उच्च छ।
निश्चित रूपमा, अक्टुबरको पहिलो आधामा, त्यहाँ दिनहरू छन् जब अधिकतम तापमान २ degrees डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ। जे होस्, ती विशेष गर्मी दिनहरू बाहेक, अक्टुबरको पहिलो आधामा, हामी धेरै शान्त महसुस गर्छौं र यस्तो देखिन्छ कि पूर्ण विकसित फ्लाग शरद arrivedतु आइपुगेको छ।
सेप्टेम्बरमा धेरै वर्षा भयो र आँधीबेहरी आयो, तर मौसम अक्टोबरमा बिस्तारै स्थिर हुनेछ। यद्यपि अक्टुबरमा पनि, यदि एक आँधीले हिट गर्छ भने, रेल र विमानहरू एक पछि अर्को बन्द हुनेछन्। कृपया भर्खरको मौसम पूर्वानुमान बारे सचेत रहनुहोस्।
ओसाका शहरको केन्द्र, जुन गर्मीमा साँच्चिकै तातो थियो, अक्टुबरमा चिसो हुनेछ, त्यसैले तपाईं रमाईलोको साथ टहल्न सक्नुहुन्छ। ओसाका टोकियो भन्दा पुरानो समयदेखि विकसित शहर हो, त्यसैले त्यहाँ धेरै पुराना मन्दिर र मन्दिरहरू छन्। र त्यहाँ प्रसिद्ध ओसाका कासल पार्क छ। यदि तपाईं अक्टुबरमा ओसाकामा बस्नुहुन्छ भने, कृपया हर तरिकाले ओसाका शहर खोजी गर्नुहोस्।
जापानमा "भोकको गिरावट" भन्ने शब्द छ। शरद Weतुमा हामीसँग मौसमी राम्रो खाना छ।
शरद riceतुमा चामल र तरकारीहरू काटन गरिन्छ र सउरी जस्तो स्वादिष्ट माछा पनि लिइन्छ, त्यसैले धेरै मानिसहरूले शरद suchतुमा यस्तो स्वादिष्ट खानाको आनन्द लिन्छन्। ओसाकामा विशेष गरी, त्यहाँ धेरै आकर्षक खानाहरू छन् जस्तै ओकोनोमियाकी र टकोयाकी, त्यसैले तपाईं नानबा आदिमा जानु पर्छ र स्वादिष्ट जापानी खानाको आनन्द लिनु पर्छ। म तपाईंलाई एक अद्भुत यात्रा को लागी शुभकामना!
अक्टुबर १ २०१ 1: स्कूलका केटाकेटीहरूको समूह उनीहरूको शिक्षकसँग ओसाका कासलको फिल्ड ट्रिपमा। प्रत्येक बिद्यार्थीले पहेलो टोपी लगाउनु पर्छ जब स्कूल बाहिर, ओसाका, जापान = शटरस्टक बाहिर
अक्टोबरको सुरूमा, अझै तातो दिनहरू छन्। टाइफुनहरू पनि भित्र आउन सक्छन्। तर समग्र, राम्रो मौसमको दिन बढ्दो छ।
ओसाकामा अक्टोबरको शुरुमा सूर्योदय समय करीव :5::55 हुन्छ, र सूर्यास्त समय लगभग १ approximately::17 हुन्छ।
न्यूनतम वायु तापमान 12.4
राम्रो मौसम अनुपात 12%
अक्टुबर १,, २०१:: ओसाकाको डोटनबोरीमा पर्यटकहरू जुन शपिंग र दर्शनीय स्थलहरूको लागि लोकप्रिय गन्तव्य हो। ओसाका, जापान = शटरस्टक
अक्टुबरको मध्यमा त्यहाँ धेरै चिसो र घमाइलो दिनहरू छन्। जापानको हिमाली क्षेत्रमा, शरद पातहरू सुरु भएको छ, तर ओसाका जस्ता मैदानहरूमा तपाईं शरद पातहरू अझै देख्न सक्नुहुन्न।
यद्यपि त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू छैनन् किनकि शरद पातहरू अझै देख्न सकिदैन। अक्टुबरको मध्यदेखि नोभेम्बरको सुरुसम्म, यो धेरै सहज यात्राको लागि सम्भव छ, यद्यपि खसीको र colors्ग सुरू भएको छैन। म यस समयमा यात्रा पनि सिफारिस गर्दछु, किनकि होटल अझै नोभेम्बरको दोस्रो आधा तुलनामा सस्तो छ जब पतनको रंग चरममा छ।
ओसाकाको मध्य अक्टोबरमा सूर्योदय समय करीव :6:०:03 छ र सूर्यास्त समय करीव १ 17:२:25 छ।
न्यूनतम वायु तापमान 8.3
अक्टुबर २२, २०१:: फार्मेसी र सौन्दर्य पसल कुरोमोन इचिबामा। कुरोमोन ईचिबा एक विशाल बजार हो जुन विक्रेताहरू सडक फूड, ताजा उत्पादन र शेलफिश बेच्ने गर्दछ, साथै स्मृति चिन्ह, ओसाका, जापान = शटरस्टक
ओसटामा अक्टोबरको अन्तमा शरद पातहरू अझै देखिंदैनन्। तर यस समयमा त्यहाँ धेरै राम्रा र घमाइलो दिनहरू छन्। यो दर्शनीय स्थलहरूको लागि उत्तम मौसम हो।
ओसाकामा अक्टोबरको अन्तमा सूर्योदय समय करीव 6:११ हो, र सूर्यास्त समय लगभग १ 11:१:17 छ।